Ikhaya – Page 6 – The Ulwazi Programme
Khumbula wethu: EsiZulwini yonke into iyabhekisiswa futhi kuyafundwa ezintweni esezenzekile esikhathini esingaphambili ukuze bonke abantu abeza ngemuva bangangeni enkingeni efanayo naleyo. Futhi kunezinkolelo eziningi abazilandelayo nabazihloniphayo, okungathi uma umuntu engakulandeli lokho okwenzekile azithole esezinkingeni: njengokuzalela ekhaya, ukuziphatha kukamakoti njalonjalo. • Njengokuthi umfana ekhaya akakwazi ukushada uma abazali bakhe bengazange bashadiswe ngokwesintu. Kunenkolelo yokuthi ukuze izinto … Read more
Ms. G Mkhize of KwaSithebe, KwaZulu says fetching water refers to the practice by girls to take containers and collect drinking water from either a river or a communal tap. Containers would either be clay pots or buckets or any container suitable for this purpose. When girls are playing pretend houses they would use empty … Read more
Categories Culture Tags Culture, Home, Ikhaya, Imidlalo yomdabu, indigenous games